Madaxweyne Muuse Biixi Oo Isku Shaandheyn Balaadhan La Dhex Gali Doona Golihiisa Xukuumadda + Iyo Masuuliyiinta Wadnaha Farta Ku Haya + Xubno Badan oo Xilalka Laga Qaadaayo.
Tuesday June 12, 2018 - 19:00:17 in Wararka by Shaqaalaha Burcoonline News
Madaxweynaha jamhuuriyadda Somalilland Muuse Biixi Cabdi ayaa lagu filayaa in uu bishan aynu ku gudo-jirno ee June uu isku shaandhayn aad weyn ku sameeyo
Hargeysa (Burcoonline) -June 12 2018- Madaxweynaha jamhuuriyadda Somalilland Muuse Biixi Cabdi ayaa lagu filayaa in uu bishan aynu ku gudo-jirno ee June uu isku shaandhayn aad weyn ku sameeyo Xukuumaddiisa. Inkasta oo uu qorshuhu ahaa in bishii hore ee May aynu ka soo dhaafnay dhamaadkeeda uu sameeyo Isku shaandhaynta Xukuumaddiisa, hadana waxa ka soo dhex gashay Bishan Barakeysnayd ee Ramadaan oo iminka gebo-gebo aynu ku dhow.
iska oo ay tahayba . Isku shaandhaynta Madaxweyne Muuse ku sameynaayo Xukuumadiisa ayaa ka danbeysa ka-dib markii ay soo if-baxeen Gal-dalooliyin badan oo ku saabsan xubnihii uu markii hore soo xushay in la shaqeeyaan oo aan sidii la doonayey uga soo bixin xilalkoodii.
Illo-Wareedyo u dhuun daloola Qasriga Madaxtooyadda Somaliland ayaa iftiimiyay in Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ay wax badan iminka uga iftiimeen masuuliyiin door ah oo uu markii hore xilalka kula deg-degay, kuwaasi oo uu qaar ka midda u dhiibay Wasaaradaha shil-shilis ee dalka . taasi oo uu iminka u arko inaanay ka fursanayn inuu isbedel deg deg ah ku sameeyo, waxaanay wararku sheegayaan in Madaxweynuhu sidoo kale aad u danaynayo in iminka xukuumaddiisa ay ku soo biiraan masuuliyiin waaweyn oo ruug-cadaaya oo siyaasadda hore ugu soo jirey . kuwaasi oo ay iminka lagama maarmaan u tahay inay qeyb ka noqdaan Xilalka cusub ee uu soo dhisaayo iminka. waxaanay wararkani sheegaan in Masuuliyiin badan ay Xilalkoodda Waayi-doona . halka kuwo kale la isku bedelaayo waxaana ku jira Wasiiro, Agaasimeyaal, Guddoomiyeyaasha goboladda iyo xubno kale. Iyaddoo Masuuliyiinta iminka Xilalka haya . ay iyagu wadnaha farta ku hayaan, waxaanu mid waliba ku hawlan yahay sidii uu u badbaadsan lahaa xilkiisa . inkasta oo uu bedelkoodu iminka miiska saaran yahay.
Dhanka kale wararka ayaa waxa ay intaasi ku darayaan in Madaxweyne Biixi go’aansaday inuu isbadelkani ay ku jiraan Tiro cusub oo ku dhow ilaa tobaneeyo Wasiir ku xigeen oo uu damacsan yahay in uu ku damiyo Qancinta iyo Qawadka Beello waaweyn oo Somaliland ah. oo uu markii hore uu si badheedha uga tegay
ama saluuga beelaha qaar oo iyaguna ku diideen saamiga ay xukuumadda ka siiyay. Si kasta oo ay sababtu tahayba Iminka waxaa la filayaa in meesha ay ka baxaan xubno aad u fara-badan kuwaasi oo ay ku jiraan Wasiiro . Maareeyayaal. Agaasimayaal Iyo Badhasaabyo oo xiitaa dadku dareemayaan tayo Xumidooda.